Rikoooo.com - Enweghị ike iwepụ!
Enweghị ike iwepụ!
Jikọtara: 19 Ọkt 2018, 18:22
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by SkipperLP » 20 Ọkt 2018, 12:06
Ya mere na nke m P3D v3 arụnyerela m ụfọdụ ụgbọ elu na ntụle.
Igwe ihe omimi r na-arụ ọrụ zuru oke ma ụgbọelu niile m arụnyere arụghị ọrụ nke ọma.
Enweghị m ike iwepụ ... ma ọ bụ mgbe m na-apụ, nanị kilomita mgbe ụgbọ mmiri ahụ gasịrị.
Agbalịrị m ịtọba uche m na max na "nso ihe efu" (Sry not sure what it is called) ruo min. na max ... Onweghị ihe gbanwere.
N'elu ikuku ndị na-achịkwa bụ ndị agbata obi na-arụ ọrụ (ma ọ bụ ike siri ike).
Nanị na ala ndị agha ahụ na-arụ ọrụ zuru oke.
Na-eji arụnyere ụgbọelu ndị emechiri site na Prepar3d ihe niile na-arụ ọrụ ọfụma.
Onye ọ bụla na-akwụ ụgwọ?
Daalụ maka inye aka
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by SkipperLP » 21 Ọkt 2018, 12:46
MGBE: Achọpụtara na ọystụ m na-ezighi ezi na-atụle maka ụgbọ elu ndị a. Tọọ "Null Mpaghara" rue 1 ọ ka mma.
MY Joystick adịghị eru ọgwụgwụ site na isi axis ọbụna Null Zone 1.
Na keyboard m niile na-arụ ọrụ.
Jikọtara: 29 Jenụwarị 2018, 16:41
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by gastop » 18 Nọvemba 2018, 12:32
Gbanwee ugo elu nke ugbo elu ka ihe efu. wee gbalịa wepụ ya na obere ntakịrị.
Ọ bụrụ na ị si n'ala, nsogbu ahụ bụ ibu.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by JackRiordan » 26 Nọvemba 2018, 04:16
1) Na windo nyocha Windows 10, tinye na njikwa. Pịa na nhọrọ Debe Njikwa Kọmputa USB. Ị nwekwara ike ịchọta nhọrọ a na Ogwe Njikwa Windows gị n'okpuru menu Ngwaọrụ na Printers.
2) Ọ bụrụ na ị depụtara onye nchịkwa ma ọ bụ ọṅụ, pịa ya, wee pịa Njirimara. Na Njirimara, pịa ntọala taabụ. Pịa bọtịnụ calibrate. Soro ntuziaka iji kpaa ngwaọrụ gị.
3) Mepee ihe nchekwa ụgbọ elu gị. Gaa na nhọrọ nhọrọ gị. Gaa na Ọrụ Ọrụ gị. Dee X X Ọrụ na Aileron Axis. Nye Exx Y gị ka Ọ bụrụ na ị ga - ahụ maka elebanye anya. Jide n'aka na ị ga-eleba igbe ahụ ka ọ gbanwee ya, otú ahụ na-adọtaghachi na osisi ahụ na-ebuli pitch (imi) nke ụgbọelu ahụ. Nye ndị agha gị ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ngwaọrụ ịchọrọ iji maka ọkpụkpụ.
4) Gaa na menu nhazi. Jide n'aka na echere ọnọdụ ụgbọ elu ka ọ bụrụ Normal. Tọgharịa ha na ndabara. Mgbe ị gbalịsịrị ịgbapụ ụgbọ elu ahụ, gbanwee ụkpụrụ ndị a dị mkpa.
5) Dị ka Gaztop kwuru, gaa na mmanụ ụgbọ ala gị na nchịkọta nhọrọ ma jide n'aka na ị naghị ebu nnukwu mmanụ ma ọ bụ ibu.
6) Tupu ibudata ya, ọ kacha mma ịgbaso ndepụta maka ụgbọelu ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị otu, google otu, ma soro ya.
7) Ọ bụrụ na ị na-achịkwa ịkwapụ, ma chọpụta onwe gị na-adọtaghachi n'elu osisi ahụ iji jide imi, ịkwesịrị inye ndị isi maka ikuku elu (ala) na elu elevator (elu). Jide n'aka na ị na-emegharị na max ka ị nwere ike ijide bọtịnụ ka ịkụpụtụ.
Jikọtara: 21 Mar 2019, 10:03 am
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Luciad10 » 21 Mar 2019, 10:06 am
SkipperLP dere, sị: MGBE: Achọpụtara na ọystụ m na-ezighi ezi na-atụle maka ụgbọ elu ndị a TNS mutuel. Tọọ "Null Mpaghara" rue 1 ọ ka mma.
Ma, ị nwekwara ike ịhọrọ maka ọṅụ ọ bụrụ na ọṅụ ahụ adịghị adaba maka ịme ihe dị iche iche ị maara.